चुट्किलाः हरेक वर्ष बच्चा जन्मिन्छ, म के गरुँ? - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः हरेक वर्ष बच्चा जन्मिन्छ, म के गरुँ?
शेरेको हरेक वर्ष बच्चा जन्मिएर हैरान भएको छ । यसको समाधानको लागि शेरेले गाउँकै कुटीमा बस्ने बाबासंग मद्धत माग्न पुग्छ ।
शेरेः बाबा, मेरो हरेक वर्ष बच्चा जन्मिन्छ । म हैरान भइसकें । म के गरुँ?
बाबाः कण्डमको प्रयोग गर्ने गर शेरे ।
शेरेः त्यो त म सधैं प्रयोग गर्छु नी बाबा ।
बाबाः उम त्यसो भए अबदेखि पुरै गाउँमा कण्डम बाँडिदेउ । कृपा उतैबाट आएको हो ।